mardi, 11 août 2020 20:04
Ambovombe: Lehilahy iray tra-tehaka niaraka tamin’ny basy gasy saika hanafika
Nahatratra olon-dratsy iray mitondra basy gasy ny Zandary nanao fisafoana tao Berary-Ambovombe ny alahady tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany alina. Saika hanatanteraka fanafihana eto Ambovombe izy ity satria tsena, ary fanaon’ireto olon-dratsy ireto ny mifamorivory eto mialohan’ny tsena toy izao, saingy tratry ny velapandrika.Notanana ao amin’ny brigady Ambovombe io olon-dratsy io anaovana fanadiadiana.
mardi, 11 août 2020 19:07
Coronavirus: Rosia no firenena voalohany nahavita vaksiny, hoy i Vladimir Poutine
Mihazakaza izao tontolo izao amin’ny fikarohana vaksiny, hany fanefitry ny Covid-19. Nanambara ny filoha rosiana Vladimir Poutine, fa i Rosia no firenena voalohany nahavita vaksiny iadiana amin’io valanaretina io.
mardi, 11 août 2020 15:25
Betsiboka: Naato avokoa ny fampianarana
Nanapa-kevitra ny DRENETP Betsiboka fa miato avokoa ny fampianarana sy ny sekoly rehetra, na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana, mandra-pisian'ny toromarika vaovao indray. Misy ny tenimita mamaritra izany. Ny antony dia noho i Betsiboka isan’ireo Faritra mbola misonga ny valanaretina coronavirus, na tafiditra anatin'ny "Phase de croissance épidémique", araka ny nambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alin’ny alahady 9 aogositra lasa teo.
mardi, 11 août 2020 12:25
MBS Anosipatrana: Alain'ny Kaominina ny trano
Araka ny taratasy fampilazana ny talen'ny Orinasa serasera MBS, izay manana ny foiben-toerany etsy Anosipatrana, avy amin'ny Ben'ny Tanàna Antananarivo Renivohitra, tamin'ny 30 jolay 2020, dia mandrava ny fifanarahana fampanofana maharitra (Bail emphytéotique), izay natao ny 08 aogositra 2000, fa misy ilany manokana ny trano. Omeny 6 volana ireo mpanofa hiala amin'ny toerana.
« Tosika Fameno » : Fianakaviana 100 mahery aty Moramanga narirarira efa tapa-bolana izao
Fianakaviana 100 mahery no miaka-midina eny amin’ny Kaominina, mitaky ny anjara « Tosika Fameno » tokony sitrahan’izy ireo. Nahazo hafatra tamin’ny finday isanisany avy izy ireo, milaza ny laharana sy ny toerana handraisana ny vola 100 000 Ariary « Tosika Fameno ». Niveri-maina anefa rehefa nandeha tany amin’ny toerana voatondro hakana ny vola, fa hoe : tsy misy vola ho an’izany ao. Efa tapa-bolana lasa io, ary nanomboka teo mandrak’ity ny androany ny fandrirarirana sy ny famezivezena ary ny fangalampiery amin’ireo tomponandraikitra mikaraka ny « Tosika Fameno » aty Moramanga amin’ireo fianakaviana ireo. Hatramin’ity androany ity, tsy mbola nahazo ny « Tosika Fameno » ireo fianakaviana ireo. « Tsy hipetra-potsiny amin’izao izahay, ary tsy hamelanay raha tsy azo ny anjaranay », hoy izy ireo.
lundi, 10 août 2020 19:26
Mahajanga: Nirehitra ireo hazo sarobidy nogiazana tao amin’ny Port
Bolabola « palissandre » miisa 385 no nogiazana tao amin’ny Port Mahajanga hatramin’ny 2010, fotoanan’ny tetezamita. Nirehitra tao amin’ny toerana nanagiazana ny alin’ny talata hifoha ny alarobia 5 aogositra, tokony ho tamin’ny 2ora maraina, ny 137 tamin’ireo, azo navotana kosa ny 248. Nanokatra fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny Zandary avy ao amin’ny birigadin’ny Port Mahajanga. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 10 août 2020 16:11
Mananjary: Mijaly rano
Misedra olana amin’ny rano efa herinandro mahery izao ny mponina eto Mananjary tampontanàna. Sahirana ny vahoaka mila rano, indrindra amin'izao ady ara-pahasalamana izay ilaina fahadiovana izao.
lundi, 10 août 2020 10:30
Nagasaki: 75 taona lasa no rotiky ny baomba atômika
Telo andro taorian’ny daroka baomba atômika nataon’ny Amerikana tao Hiroshima izay nahafatesana olona 140 000 teo dia rotidrotiky ny baomba atômika amerikana koa ny tanànan’i Nagasaki ny 9 aogositra 1945, nahafatesana olona 74 000 teo. Nisy omly ny tsiaro nataon’ny vahoaka Japoney, manaja ny fepetra ara-pahasalamana noho ny coronavirus. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 09 août 2020 15:13
Ladoany Malagasy: Nodimandry i Vola Razafindramiandra Ramiandrasoa, Tale jeneraly teo aloha
Tale jeneralin'ny Ladoany Malagasy tamin'ny fitondrana Ravalomanana sy tamin'ny tetezamita i Vola Razafindramiandra Ramiandrasoa. Nodimandry androany maraina ity farany. Mpiasam-panjakana efa misotro ronono ny tenany.
dimanche, 09 août 2020 08:29
Fahamehana ara-pahasalamana: Nitarina 15 andro, ary mihatra avy hatrany manomboka ny 08 Aogositra 2020
Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny «Fahamehana ara-pahasalamana» manomboka ny sabotsy 08 Aogositra 2020, ary mihatra avy hatrany. Noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny didim-panjakana mamaritra izany, taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana. Hohazavain’ny Filoham-pirenena mandritra ny fandaharana manokana ao amin’ny Televizionina Malagasy anio alahady amin’ny 08 ora alina ireo fepetra rehetra sy ny andinidininy mikasika ny lamina sy ny fandrindrana rehetra hoentina miatrika ny 15 andro manaraka.